तपाइँलाई मौसम सहयोग गर्न संसाधनहरू खोज्नुहोस्
अहिले स्रोतहरू खोज्नुहोस्
एमएएफको संसाधन खोजकर्ता एक नि: शुल्क र अज्ञात अनलाइन उपकरण हो जुन चाँडै नै तपाईंलाई स्थानीय, राज्य, र राष्ट्रिय संसाधनहरूमा तपाईंलाई आवश्यक छ जडान गर्दछ।
तपाईको हालको अवस्थाको बारेमा सामान्य प्रश्नहरूको जवाफ दिन केहि मिनेट लिनुहोस् (कुनै व्यक्तिगत पहिचानयोग्य जानकारी सोधिएको छैन)। तपाईंको सेवन प्रतिक्रियाहरूको आधारमा, उपकरणले तपाईंलाई मद्दत पुर्‍याउने सहयोगी संसाधनहरूसँग मिलाउछ।
१. छोटो फारम पूरा गर्नुहोस्
"अब स्रोतहरू खोज्नुहोस्" बटन क्लिक गर्नुहोस् र केहि प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। तपाईंलाई व्यक्तिगत जानकारीको लागि सोधिने छैन।
२ मिल्दो परिणामहरू पाउनुहोस्
तपाईंको उत्तर र कार्यक्रम योग्यतामा आधारित, हामी तपाईंलाई स्रोतहरूको सूची दिन्छौं जुन तपाईं योग्य हुन सक्नुहुन्छ।
Res. संसाधनहरूसँग जोड्नुहोस्
तपाईंको निजीकृत सूची संसाधनहरूको लागि स्प्रिboardबोर्ड हो - निश्चित रूपमा पक्का गर्नुहोस् र समर्थनको लागि तपाईंलाई आवश्यक समर्थनको लागि सिधा आवेदन दिनुहोस्।
कसरी संसाधनहरू थप्ने
हामी तपाईंको इनपुट स्वागत गर्दछौं! हामीलाई यो सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्नुहोस् कि यो उपकरण सहि, सशक्त, र हाम्रो समुदायहरूमा पहुँचयोग्य छ। तपाईले 'नयाँ रिसोर्स' फारमलाई तल पुरा गरेर साझेदारी वा अपडेट गर्न सक्नुहुनेछ। हामी सबमिशनहरू समीक्षा गर्नेछौं र रोलिंग आधारमा स्रोतहरू थप्नेछौं वा अपडेट गर्नेछौं।
एक नयाँ स्रोत सबमिट गर्नुहोस्
कुन भौगोलिक क्षेत्र संसाधन खोजकर्ता उपकरण कभर गर्दछ?
सबै अमेरिका, यसले देश भरका मानिसहरूलाई उनीहरूको संसाधनहरूमा जोड्दछ। हामीले केहि प्रमुख संसाधनहरू सँगै खींच्यौं - फेडरल, राज्य, र स्थानीय समर्थन सहित। यो पूर्ण सूची होईन र यसलाई सुधार गर्न हामीलाई तपाईंको मद्दत चाहिन्छ। यदि तपाईंलाई स्रोतको बारेमा थाहा छ जुन पहिल्यै संसाधन खोजकमा समावेश गरिएको छैन भने, हामीलाई पूरा गरेर साझा गर्नुहोस्aसबमिशन फारम.
त्यहाँ एक स्रोत छ जुन मलाई थाहा छ तर सूचीबद्ध छैन। यसलाई थप्न कुनै तरीका छ?
हो! हामीले जानाजानी यस उपकरणलाई सहकार्यको लागि खुला बनायौं: स्थानीय समुदायका सदस्यहरू, गैर-नाफामुखी संस्था, र अरू कोहीले उनीहरूलाई थाहा भएको थप संसाधनहरू थप्न सक्दछन्। हामीले तिनीहरूलाई पोखरीमा थप्नु अघि, एमएएफले तिनीहरूलाई जाँच गर्नेछ। एक स्रोत सबमिट वा अपडेट गर्नुहोस् यहाँ.
के मसँग COVID-19 संसाधन खोजकर्ता प्रयोग गर्न सामाजिक सुरक्षा नम्बर छ?
हामीले COVID-19 संसाधन खोजकर्ता फारम भर्दा हामी व्यक्तिगत रूपमा पहिचान योग्य जानकारीको लागि सोध्ने छैनौं। हामीलाई तपाईं, तपाईंको परिवार र तपाईंको आवश्यकताहरूको बारेमा केहि आधारभूत जानकारी चाहिन्छ। हामी केहि प्रश्नहरू सोध्छौं जुन तपाईको जीप कोडमा बस्नुहुन्छ, कस्तो प्रकारको काम गर्नुहुन्छ, र तपाइँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न।
के एमएएफले आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दैछ?
MAF को COVID-19 संसाधन खोजकर्ता मानिसहरु लाई आवश्यक संसाधनहरु संग कनेक्ट गर्न को लागी स्थापित गरिएको छ। तपाईलाई के उपलब्ध छ भन्ने पत्ता लगाउने उत्तम तरिका भनेको फारम भर्नु हो र के राहत पत्ता लगाउनु हो, एमएएफ़ र अन्यबाट तपाई योग्य हुनुहुन्छ।
के यो मेरो जानकारी साझेदारी गर्न सुरक्षित छ?
हो! संसाधन खोजकर्ता उपकरण प्रयोग गर्न हामी कुनै पनि व्यक्तिगत-पहिचान योग्य जानकारीको लागि सोध्दैनौं। हामीलाई केवल तपाईंको बारेमा आधारभूत जानकारी, र तपाईंको आवश्यकताहरू आवश्यक छ। यदि तपाइँ हाम्रो कुनै एक कार्यक्रमको लागि आवेदन गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ आश्वस्त हुन सक्नुहुन्छ कि हाम्रो अनलाइन अनुप्रयोग पूर्ण ईन्क्रिप्टेड, सुरक्षित छ, र हामी ग्राहक डेटा सुरक्षित गर्न ईन्डस्ट्री-अग्रणी सेफगार्डहरू राख्छौं।